Göteborg: Guri ku yaala xaafadda Biskopsgården oo qarax ka dhacay | Somaliska
Qarax loo maleyeey inuu sababay bam gacmeed la dhigay guri ku yaala xaafadda Biskopsgården ee Göteborg ayaa caawa fiidkii qarxay, sidaana waxaa sheegay booliska gobolka. Mid ka mid ah daaqadaha guriga oo garneyl gacanta ah lugu tuuray islamarkaasina aha qol jiifka ayaa boolisku rusan yihiin bartilmaameedku ahaa.
Booliska oo gaaray goobta uu ka dhacay qaraxa ayaa sheegay ineeysan cadeeyn karin xilliga dhabta ah ee uu qaraxa dhacay. Balse waxaa ay farta ku fiiqeen inaanu cidi wax ku noqon marka laga reebo qasaaro maadi ah oo uu geestay. Booliska waxaa ay xireen goobta qaraxa ka dhacay, waxaana ay wadaan baartaano iyagoo ku sifeeyey inuu ahaa falkaasi isku day dil oo lugu doonayey in lugu qaarajiyo mid ka mid ah kooxaha falal dambiyeedka geeysta ee dirirta u dhaxeeyso kaas oo halkaa deganaa.
Dhacdadan ayaa ugu dambeyntii waxeey ku soo aadeeysa labaatan iyo afar saac ka dib markii isla sidaan oo kale guri ku yaala xaafadda Biskopsgården dhinaceeda koonfureed guri ku yaala lugu tuuray garneyl kuwa gacanta laga tuuro ah. Göteborg ayaa haatan waxaa ka soo labo kacleeyey diriritii u dhaxeeysay kooxaha fal dambiyeedyadda geestay oo in muddo ah is baacsanayey. Arrintaana waxaa ay dadka xaafadda gelisay wel wel iyo cabsi hor leh iyadoo sanadihii ugu dambeeyeyna ay magaaladda Göteborg ka soo kabaneeysay diiftii ay kooxahani ku reebeen sannado ka hor.